YAAB! Kangana Ranaut Oo Weerar Ku Qaaday Deepika Padukone Iyadoo Ka Hadleysa Arrimo Ku Saabsan Shahid Kapoor - Hablaha Media Network
YAAB! Kangana Ranaut Oo Weerar Ku Qaaday Deepika Padukone Iyadoo Ka Hadleysa Arrimo Ku Saabsan Shahid Kapoor
HMN:- Atariishada muranka dhalisa Kangana Ranaut waxay haatan si weyn ugu mashquulsan tahay xayeysiinta filimkeeda Rangoon oo ay waday maalmihii ugu dambeeyey, si kastaba ha ahaatee, 29 sanno jirtaani waxay si toos ah uga faa’iideysatay fursad kasta oo ay weerar kula qaadi kartay Shahid Kapoor, Hrithik Roshan iyo haatan oo ay gashay atariishada caalamiga ah Deepika Padukone.
Wareysi ay dhawaan siisay shabakadda PV Times ayey Kangana Ranaut weerar dadban kula qaaday atariishada ka howlgashay Hollywood ee Deepika Padukone balse waqtigaas waxay ka hadleysay arrimo ku saabsan atooraha caanka ah Shahid Kapoor oo ay isla hogaaminayaan filimka Rangoon.
Hadalka Kangana Ranaut ayaa ku bilowday: “Mararka qaar waxaan sameeyaa waxyaabo aad u xun. Mararka qaar si dhab ah uma qaato waxyaabaha aan ka hadlaayo. Sidoo kale warbaahintu waxay u baahan yihiin in aysan iweydiin su’aalo aanan u qalmin.
“Mararka qaar waxay iweydiinayaan inaan tilmaamo atooraha ugu baashida wanaagsan ee aan filim la sameeyey? Maxaan ugu jawaabaa markaas? Maxay ula jeedaan? – Raggaani caruur ayey leeyihiin, umana eegno habka aad adinku ka hadleysaan marka aan howsha baashida ee aflaanta ku jirno”.
Wixii intaas ka dambeeye waxay weerar dadban ku qaaday Deepika Padukone: “Tani waa shaqadeena, waxaana ka dhacsanaa rootiga. Laakiin waxaa jira dad si xun uga hadla howsha aan heyno ama nuuc aan loo baahneyn u fasira.
“Marnaba anigu ma jecli inaan ka hadlo arrimo ku saabsan shaqadeyda, sababtoo ah markasta waxaan halis u gelayaa inaan bixiyo hadal qaldan. Balse waa inaan sheegaa inaan jeclahay goloofiska feerka ee Shahid Kapoor.
“Miyaa la heli karaa kuwo ka wanaagsan? – Dadka aan ogeyn aan wax fahamsiiyo. Deepika Padukone ayaa sidaan oo kale mar saxaafadda ula hadashay intii lagu jiray xayeysiinta filimka Tamasha.
“Deepika waxay sheegtay markaas inuu Ranbir Kapoor heysto goloofiska feerka kuwo ugu quruxda badan. Aniga maxaa ii diidaya inaan faaniyo kuwa Shahid Kapoor”.
Malaha ma jirto cid dagaal afka ah uga adkaan karta atariishada caanka ah Kangana Ranaut, shaqsi kasta meel ayey saartay. Yaa ku aada ayaad isleedahay?